Myagdi News - For All, Forever
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध युवा संघ र अनेरास्ववियुको विरोध
अध्यक्ष भण्डारीद्धारा प्रेस युनियन म्याग्दीलाई ५१ हजार १११ रुपैयाँ सहयोग
म्याग्दी। म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले नेपाल प्रेस युनियन म्याग्दीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ । एक कार्यक्रमका विच अध्यक्ष भण्डारीले प्रेस युनियनको अक्षयकोषलाई एकाउन्न हजार एक सय ११ रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको…
म्याग्दी ।म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा आज (मङ्गलवार)देखि शीघ्र कुपोषणको व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत बहिरङ्ग उपचार केन्द्रको प्रगति समीक्षा गोष्ठी सुरु भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको आयोजना र युएसआईडीको सहयोगमा मिलन म्याग्दीद्वारा सञ्चालित सुआहारा कार्यक्रमको…
चुनावमा हारेका खड्के दर्जीलाई बधाई !
चन्द्रप्रकाश बानियाँ म्याग्दी । चुनाव जितेका कसैलाई बधाई दिइएन । बरु हारेको उमेदवारलाई बधाई दिन मनलाग्यो ! मेरो गाउँ, बेनी नगरपालिका–५, पुला सिङ्गो पुलामा दलितहरुको आवादी ३५ प्रतिशत छ । चुनाव नजिते पनि…
जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि एमालेको एकल बहुमत,प्रमुखमा थापाको दाबी
म्याग्दी । म्याग्दीमा जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि नेकपा (एमाले)लाई स्पष्ट बहुमत आएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्ष र उपप्रमुख रउपाध्यक्षले मतदान गर्ने जिससका लागि जिल्लामा १२ मतदाता छन् ।…
म्याग्दीमा ७ दशमलव ५७ प्रतिशत मत बदर
म्याग्दी । हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा म्याग्दीमा सात प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएको छ । जिल्लाका छ स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुखरउपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, दलित महिला, महिला र खुला सदस्य पदमा खसेको मतको…
अब वडा कार्यालयको सेवा बस्ती–बस्तीबाट
म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ पाखापानीले वडा कार्यालयका सेवाहरू बस्ती–बस्तीबाट सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष मनकुमार शेरपुञ्जा मगरले पदभारग्रहण गदैं बस्तीमा इन्टरनेटको सुविधा विस्तार गरी…
रघुगंगा – ८ मा अध्यक्षमा छन्त्यालसहित काँग्रेसको प्यानल विजयी
म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका वडा नम्वर ८ कुइनेमंगलेमा वडा अध्यक्षमा गमान छन्त्याल विजयी हुनुभएको छ । उहाँले ४५१ मत प्राप्त गरि जित हाँसिल गुर्नभएको हो । उहाँका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका तेजिन्द्र…
कोरोनाभाइरसका (Covid-19) केसहरू
बेनी नगरपालिका मेयरमा एमालेका केसी र उपमेयरमा माओवादीकी लामिछाने
बेनी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुरत केसी विजयी हुनुभएको छ । मंगलबार विहान सम्पन्न मतगणना अनुसार केसीले सात हजार ६ सय ३ मत प्राप्त गरी प्रमुखमा विजयी हुनुभएको…
बेनपा–७ को वडाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका रमेशकुमार श्रेष्ठ विजयी
म्याग्दी । बेनी नगरपालिका ७ को वडाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका रमेशकुमार श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको छ । सदस्यहरू शोहन श्रेष्ठ(विश्वास), सिर्जना श्रेष्ठ, एमालेका रमेश फगामी माओवादीकी सुजता किसान विजयी हुनुभएको छ ।
बेनपा– ५ पुलाचौरमा एमालेको प्यानल विजयी
बेनी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका – ५ पुलाचौरमा नेकपा एमालेको प्यानलनै विजयी भएको छ । वडा अध्यक्षका उम्मेद्धार गोविन्द बानियाँले ९ सय २० मत ल्याएर विजयी हुनूभएको हो । उहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली…
प्रदेश १ मा जेठ १६ गतेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान
विराटनगर । प्रदेश १ मा जेठ १६ का लागि बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले सरकारको सिफारिसमा मंगलबार बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो । मन्त्रिपरिषद्को जेठ ९ गतेको…
मालिका गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य पदका लागि १२ जनाको उम्मेद्वारी
बेनी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य पदका लागि १२ जनाको उम्मेद्वारी दर्ता भएको छ । कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले ६,नेपाली कांग्रेसले ३, माओवादी केन्द्रले २,नेकपा एकिकृत समाजवादीले एक जनाको…
मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एमाले बिजयी
बेनी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजयी भएका छन् । अध्यक्षमा नेकपा एमालेका बेगप्रसाद गर्बुजाले तीन हजार ९१ मत र उपाध्यक्षमा एमालेकै लक्ष्मीदेवी घर्ति पुनले तीन हजार १६७ मत ल्याएर…
दानामा पुनः मतगणनाको माग भएपछि अन्नपूर्णको मतगणना स्थगीत
म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको मतगणना स्थगित भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएपनि पुनः मतगणना हुनुपर्ने भन्दै नेपाली काँग्रेसले विरोध जनाएपछि मतगणना स्थगित भएको हो । बदर मत देखाउने…
काठमाडौंँ १३ सरकारी अस्पतालमा कोभिड ओपिडी सेवा सञ्चालन
काठमाडौँ । कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि काठमाडौंका अस्पतालहरुमा कोभिड ओपिडी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कोराना संक्रमित बिरामीलाई बेड अभाव भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौंका सरकारी अस्पतालहरुमा कोभिड ओपिडी सेवा सुरु गरेको…
धवलागिरी – ३ को वडा अध्यक्षमा कांग्रेसका रोका विजयी
बेनी । म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ को वडा अध्यक्षमा देवेन्द्र रोका विजयी हुनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धअध्यक्षमा उम्मेद्धार बन्नुभएका रोकाले एमालेका मदन मल्ललाई १८ मताान्तरले…
भोट नदिएको भन्दै मल्कवाङमा महिलामाथि कुटपिट
म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका – ५ , मल्कवाङमा मध्यरातमा एक समुहले गाउँमा कुटपिट गरेको छ र निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत नदिएको भन्दै नेकपा एमाले सर्मथकले नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई कुटपिट गरेको नेपाली…
काठमाडौँ । स्पेनिस ला लिगा फुटबलको अन्तिम खेलमा बार्सिलोना घरेलु मैदानमै भियारियालसँग २–० ले पराजित भएको छ । घरेलु मैदान क्याम्प नोउमा जितसहित सिजनको सुखद् अन्त्य गर्ने बार्सिलोनाको लक्ष्यमा भियारियालका अल्फान्सो पेडराजा…
काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री उज्रा जियाबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारमा भएको भेटमा आपसी सहयोग र द्धिपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल भएको गृहमन्त्रीको…
प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिकी उपमन्त्री जियाबीच भेट
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री उज्रा जियासँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका जियाको टोली प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटका लागि बालुवाटार पुगेको थियो…
मंगलाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एमाले विजयी
म्याग्दी । नेकपा एमालेबाट मंगला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा सतप्रसाद रोका र उपाध्यक्षमा पेमा अधिकारी विजयी हुनुभएको छ ।गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित रोकाले कुल ३ हजार ९ सय ६८ मत प्राप्त गरि दोस्रो पटक अध्यक्षमा…
मंगला–४ को वडा अध्यक्षमा कांग्रेसका लालबहादुर रोका बिजयी
बेनी । म्याग्दीको म‌ंगला गाउँपालिका वडा नम्बर ४ को वडा अध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेद्वार लालबहादुर रोका मगर बिजयी हुनुभएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार वडा अध्यक्षमा विजयी हुनुभएका रोकाले ३ सय ३३…
म्याग्दी ।पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले गरेको मूल्यवृद्धिको विरुद्धमा म्याग्दीमा आज एमालेनिकट राष्ट्रिय युवा संघ र अनेरास्ववियुले विरोध गरेका छन् । सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यास तथा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा गरेको मूल्यवृद्धिको विरोधस्वरुप…
नवनिर्वाचित मेयर साम्पाङको पहिलो निर्णय ‘कर प्रणाली व्यवस्थित गर्न कार्यदल’
धरान । धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क साम्पाङ्ग मेयर भएको भोलिपल्ट नै कर सम्बन्धी व्यवस्थाहरुलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन कार्यदल गठन भएको छ । साम्पाङगले पदभार ग्रहणपछि पहिलो निर्णय गर्दै आन्तरिक राजश्व बढाउन, करको…
काठमाडौं । १५ विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मुल्यवृद्धि फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उद्योग,वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई मन्त्रालयमा भेटेर विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न…